Smart Kaadị, Access Control Card, Hotel Key Card, Smart NJ Card - Mk
Kpọtụrụ IC kaadị
Nga lam inlay mpempe akwụkwọ
oge ufodu kaadị
Crysta mama kaadị
OEM size kaadị
Magnetik straipu kaadị
Hi-CO Magnetik straipu kaadị
Lo-CO Magnetik straipu kaadị
Personal foto kaadị
Magnetik straipu Card
Crystal mama Card
anyị na-enye Fashion Ngwa na discount price
Nakwa dị ka nnukwu ulo oru mbo ke mmepụta hardware, anyị na-elekwasị anya na enterprise management. Na EPR management na 7 mmalite ọkọlọtọ, anyị nwere nnukwu oru oma na-arụ ọrụ otu nke 200 ọrụ. Ugbu a, anyị nweta Production ikike, ISO 90001, ike circuit akwụkwọ ọchịchị.
Bụ RFID Technology Secure na Private?
Dị mwute ikwu na, ọ bụghị nke ukwuu mgbe na usoro nke na-eji ọkụ ndị yiri ka a ga-gụrụ. Onye ọ bụla na-n'ụzọ kwesịrị ekwesị onwem nyocha na nso ohere ka RFID ngwaọrụ nwere ike n'ọrụ ya ma na-agụ n'ime ya. O doro anya na ụfọdụ na-akpata nchegbu na-ukwuu karịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị site na gị akpa nke akwụkwọ ...
Olee RFID Works
Gịnị bụ RFID?
RFID anọchi Radio-Frequency njirimara. The acronym na-ezo aka obere kọmputa ngwaọrụ na iso nke a obere mgbawa na poolu. The mgbawa a bụ ike nke na-ebu 2,000 bytes nke data ma ọ bụ obere. The RFID ngwaọrụ-eje ozi na otu nzube dị ka a mmanya koodu ma ọ bụ a magnetik warara na azụ ...
Adress: Mba 902, Ft 9, Changlian Na. Bldg., Nke 168, Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan Guangdong China